लिंग दोस्रो पटक किन उत्तेजित नभएको ? - यौन जिज्ञासा र समाधान - साप्ताहिक
लिंग दोस्रो पटक किन उत्तेजित नभएको ?
- डा राजेन्द्र भद्रा
भाद्र २०, २०७१
एकपटक यौनसम्पर्क गरिसकेपछि दोस्रो पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा लिंग जति प्रयास गरे पनि कडा हुँदैन। किन होला ?
तपाईंलाई पक्कै थाहा भएको हुनुपर्छ कि मानव यौन प्रतिक्रिया चक्रको सन्दर्भमा मानव शरीर चारवटा मुख्य चरणबाट गुज्रन्छ। ती चरण १. Excitement Phase (उत्तेजनाको चरण), २. Plateau Phase, ३. Orgasm Phase (चरमसुखको चरण) तथा ४. Resolution Phase हुन्। Excitement Phase लाई निरन्तरता दिए दोस्रो चरण Plateau Phaseमा पुगिन्छ। यो चरणलाई पनि निरन्तरता दिइए व्यक्ति चरमसुखको चरणमा पुग्छ। यही चरणमै वीर्य स्खलन हुन्छ। त्यसपछि बिस्तारै पूर्व अवस्थामा र्फकने चरणलाई Resolution Phase भनिन्छ। आधारभूत रूपमा उस्तै भए पनि महिला र पुरुष यौन प्रतिक्रिया चक्रमा हुने भिन्नतामध्ये एउटा refractory period हो।
महिलाले एउटै यौनसम्पर्कमा एकभन्दा बढी यौन चरमसुख प्राप्त गर्न सक्छन्, तर पुरुषको हकमा त्यस्तो हुँदैन। चरमसुखपछि पुरुष तथा महिला दुवै नै सामान्य अवस्थामा र्फकन्छन्, तर यसमा एउटा आधारभूत भिन्नता हुन्छ। चरमसुख पाइसकेपछि सामान्य अवस्थामा र्फकन लागेकी महिलालाई पुनः उत्तेजित बनाई चरमसुखको स्थितिमा लान सकिन्छ, तर पुरुषलाई भने सकिँदैन, किनभने पुरुषहरू Refractory Period मा जान्छन्। उक्त अवधिमा पुरुषलाई जति नै तीव्र किसिमको यौन उत्तेजना दिए पनि उत्तेजित गराउन सकिँदैन। व्यक्तिअनुसार तथा एक व्यक्तिमा पनि विभिन्न समयमा यो अवधि फरक-फरक हुन सक्छ, जुन केही मिनेटदेखि कैयौं घण्टासम्मको हुन सक्छ। तपाईंले तुरुन्तै दोस्रो पटक यौनसम्पर्क गर्न नसकेको कारण यही हुनसक्छ। तपाईंले यो Refractory Period पछि यौन क्रियाकलाप सुरु गर्नु भए यस किसिमको समस्या पर्दैन। यो एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। यसमा अनावश्यक रूपमा उपचार गर्न खोज्नुले केही फाइदा गर्दैन।
मेरो लिंग बांगो छ। यस्तो स्थितिमा यौनसम्पर्क गर्दा कुनै असर गर्छ कि गर्दैन ? यसको उपचार छ कि छैन ?
लिंगको बाङ्गोपनको कुरा गरिहाल्नुभन्दा पहिले यसको संरचनाका बारेमा केही कुरा गरौं। लिंग मुख्यतया तीनवटा स्पन्ज जस्तो संरचनाले बनेको हुन्छ। लिंगको माथितिर दुईवटा Corpus Cavernosa भनिने भाग हुन्छन् भने तलतिर Corpus Spongiosum। लिंग उत्तेजित हुँदा यिनै संरचनाहरूमा रगत भरिन्छ र लिंग मोटो अनि कडा हुन्छ। उत्तेजित नभएका बेला त लिंग एउटा लचिलो अङ्ग जस्तो देखिन्छ र बाङ्गोपनको खासै आभास हुँदैन, तर उत्तेजित हुँदा मात्र त्यसको बाङ्गोपन देखिन्छ। तपाईंले आफ्नो लिंगलाई कुन अर्थमा बाङ्गो मान्नुभएको हो तथा कसरी आफ्नो लिंग सामान्यभन्दा बाङ्गो भएको थाहा पाउनुभयो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ।
व्यक्ति-व्यक्तिअनुसार लिंगको नाप र आकारमा पर्याप्त भिन्नता हुन्छ र यो लिंगको विकासक्रममै हुने कुरा हो। हाम्रो शरीरको पनि दायाँ-बायाँ ठयाक्कै बराबर हुँदैन, केही फरक हुन्छ। शरीरको बीचमा परेको भए पनि शरीरको विकासका क्रममा त्यसको प्रभाव लिंगमा पनि देखिन्छ। सबै पुरुषको लिंगको आकार एकै किसिमको हुँदैन र उत्तेजित अवस्थामा एकदम सीधा नभई लिंग आफैंमा केही मात्रामा टेढो (बाङ्गो) हुन्छ। यो सामान्य कुरा नै हो। कतिपयले लिंग शरीरसंग टाँसिएको कोणलाई लिएर बाङ्गोपनको कुरा गर्छन्। कतिपयले लिंग उत्तेजित हुँदा शरीरवाट सीधा बाहिर निस्किएको वा भुइँसँग समानान्तर (उभिएको अवस्थामा) हुनुपर्छ भन्ने सोच्छन्, तर कुरा त्यस्तो होइन। लिंग उत्तेजित हुँदा केही छड्के हुन सक्छ। लिंगको Corpus Cavernosa भाग जघनास्थीसम्म जोडिएको हुन्छ। यसले उत्तेजित लिंगको कोणलाई निर्धारित गर्छ। पत्रमा उल्लेख भएको कोण यसअनुसार लिइएजस्तो बुझिएन।
टेढोपन निकै छ भने समस्या गम्भीर हुनसक्छ, तर त्यस्तो स्थिति अति विरलै हुन्छ। मूत्रनलीको विकासमा गडबडी भएर टेढोपन भएको स्थितिमा लिंग तलतिर बाङ्गो हुन्छ। यदि लिंग निश्चित (स्थायी) रूपमा बाङ्गो भएको अवस्थालाई अजयचमभभ भनिन्छ। मूत्रद्वारको संक्रमण पनि त्यस्तो बाङ्गोपनको कारण हुनसक्छ। Peyronie's disease मा सामान्य लिंग अकस्मात् निकै बाङ्गो भै यौनसम्पर्क गर्न नसक्ने हुन सक्छ र दुख्छ पनि। पक्का रूपमा कारण थाहा नभएको यो रोग प्रायः ४० वर्ष भन्दा माथिका मानिसलाई लाग्छ, जुन तपाईंलाई भएको हो भन्ने आधार छैन। यस्ता गम्भीर समस्याहरूका लागि मात्र चिकित्सकको सहयोग आवश्यक पर्छ।
के यौनसम्पर्कमा असर पर्छ ?
पुरुषलाई निकै चिन्ता हुने भए पनि हल्का किसिमको लिंगको बाङ्गोपनले यौनसम्पर्कलाई कुनै किसिमको बाधा पुर्‍याउँदैन र यौनसुख पनि लिन तथा दिन दुवै सकिन्छ। तपाईंले बाङ्गो भएका कारण योनिमा लिंग नै पसाउन नसकिने गरी गम्भीर किसिमको बाङ्गोपन छ भने शल्य चिकित्सा नै लिंग सोझ्याउने एकमात्र उपाय हो। विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने शल्यक्रियाका हानि पनि हुन सक्छ। त्यसैले तपाईंलाई आफ्नो लिंगको बाङ्गोपनका सम्बन्धमा शंका छ भने शल्य चिकित्सकको परामर्श लिन सक्नुहुन्छ। आवश्यक नै नभै हल्का किसिमको बाङ्गोपनलाई सोझ्याउन खोज्दा फाइदाको सट्टा बढी नै हानि हुने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यसैले लिंगमा गरिने यस्ता शल्यक्रियालाई सामान्य मान्नु हुँदैन।
प्रकाशित :भाद्र २०, २०७१
गर्भवती भए-नभएको कुरा घरमै जाँच्न सकिँदैन ?
तेस्रो पटक डिग्री माइला
तपाईं जाडो महिनामा हप्तामा कति पटक नुहाउनुहुन्छ ?
किन गरे आलोकले आत्महत्या ?
राजको दोस्रो कोसिस
यस्तो चाहना किन हुन्छ ?
योनि कसिलो बनाउन के गर्न सकिन्छ ? वैशाख ११, २०७६
पाठेघर झिकिएकी महिलासँग यौनसम्पर्क गर्न हुन्छ कि हुँदैन  ? वैशाख १०, २०७६
योनि कसिलो बनाउन के गर्न सकिन्छ  ? चैत्र २८, २०७५
हस्तमैथुनको लत र यसका असर चैत्र २१, २०७५
वीर्यमा ठोस पदार्थ किन आउँछ फाल्गुन ३०, २०७५
यौनका बारेमा जान्नुपर्ने ६ कुरा फाल्गुन २४, २०७५
के हो यौन परिकल्पना ? फाल्गुन १७, २०७५